Ny firmware an'ny AirPods dia hanana vaovao ihany koa | Avy amin'ny mac aho
Toni Cortes | 07/06/2021 23:35 | maro
Ny fanolorana ny WWDC amin'ity taona ity. Tim Cook sy ny ekipany dia naneho taminay ny vaovao izay hampidirina ao amin'ireo kinova rindrambaiko amin'ity taona ity. Midika izany fa amin'ny ambaratonga lehibe kokoa na kely kokoa, ny fitaovana Apple rehetra dia hanana fiasa vaovao vantany vao havaozina izy ireo.
Ary ny "rehetra" dia misy koa ny AirPods. Rehefa nohavaozina ny fitaovan'ny orinasa dia hahazo fampiasa vaovao ny headphone an'i Apple, ny sasany amin'izy ireo dia tena mahaliana ny mpampiasa. Andao hojerentsika izy ireo.
Ny AirPods dia tsy hadinon'ireo tovolahy avy any Cupertino, ary handray vaovao mahaliana izy ireo raha vantany vao mivoaka amin'ny fomba ofisialy ireo rindrambaiko vaovao amin'ity taona ity.
1 Mampiroborobo ny resaka
3 Tadiavo ny AirPods-ko
4 Audio spatial
Mampiroborobo ny resaka
Ity no fiasa AirPods voalohany izay Tim Cook ary ny ekipany nampahafantatra anay ny tolakandro teo. Fampisehoana natao hanampiana ny olona manana olana maheno ny fihainoana. Fampisehoana vaovao iray izay mampiasa audio computational sy mikrôpônina fantsom-pitaovana AirPods Pro hampifantoka feo voaray amin'ilay olona miteny eo alohanao.
Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hampihena ny isan'ny tabataba manodidina inona no mitranga manodidina anao. Ireo fiasa roa ireo dia afaka manakana ny tabataba manodidina ary manatsara ny resadresakao amin'ilay olona eo alohanao ao anaty tontolo be tabataba.
Siri dia efa nampitandrina anao tamin'ny fampandrenesana vaovao nandritra ny fotoana kelikely, ary izao dia mitondra an'io fampiasa io amin'ny fampandrenesana rehetra Fanambarana fampandrenesana. Azonao atao izao ny manova an'io endri-javatra io mba hanambarana fotsiny ny fampandrenesanao tena lehibe sy manara-potoana. Azonao atao koa ny mampiasa fampandrenesana hampahatsiahy anao izay hovidiana amin'ny fivarotana enta-mavesatra raha toa ka namorona fampahatsiahivana manokana tao amin'ny toerana fivarotana enao amin'ny app Reminders.
Ny endri-javatra dia azo ampifanarahana amin'ny fampandrenesana fampandrenesana fotsiny avy amin'ireo fampiharana safidinao, ary azonao atao ny mamelona ny Do Not Disturb hamono azy ireo tanteraka. Apple koa dia nilaza fa raha mampiasa ilay endrika vaovao ianao Focus izay manasaraka ny fiainanao manokana sy ny fiainanao, ny safidinao fampandrenesana dia horaisina ho azy.
Tadiavo ny AirPods-ko
Ny fanavaozana ny lozisialy Apple farany dia ahafahanao mahita ny AirPods Pro o AirPods Max Very tamin'ny fampiharana Find, toy ny amin'ny AirTags vaovao. Raha very azy ireo ianao, ny AirPods anao dia handefa ny toerany amin'ny alàlan'ny Bluetooth izay ho tsikaritr'ireo fitaovana Apple hafa. Azonao atao ny mampiasa ny app Find Me mba hampandre azy ireo feo na hampiasa ny fijerena akaiky azy ireo hahafantarana rehefa akaiky hahita azy ireo ianao. Ny Find My app koa dia hampandre anao izao raha sendra avelanao any aoriana ny AirPods anao.
Apple koa dia mitondra fanohanana am-peo TVOS mba hahafahanao miaina feo manodidina miaraka amin'ny AirPods Pro na AirPods Max ao amin'ny efitranonao fa tsy manelingelina olon-kafa. Ny fanohanana audio spatial ho an'ny AirPods dia ho tonga amin'ny macOS ihany koa ho an'ny Mac miorina amin'ny processeur vaovao M1. Ny audio Spatial koa dia tonga amin'ny Apple Music sy ny app FaceTime.
Mazava ho azy fa mba hankafizanao ireo endri-javatra rehetra ireo dia tsy maintsy havaozina ny AirPods sy ny fitaovana mifanentana mandefa ny mozika tianao henoina. Raha ianao developer, azonao atao izao ny misintona ny betas voalohany. Raha tsy izany dia tokony hiandry hatramin'ny volana jolay ianao, fara fahakeliny, vao afaka hitsapana ireo betsa ampahibemaso voalohany. Ary raha tsy dia manam-paharetana ianao dia tsy maintsy miandry ny kinova ofisialy ho an'ny mpampiasa rehetra izay hatombok'i Apple amin'ny fahavaratra farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny firmware an'ny AirPods dia hanana vaovao ihany koa
Ireo no Mac izay hanohana ny macOS Monterey